China kabini umqolo tapered iibheringi mqengqeleki ukwenziwa kunye mveliso I-CMC
Imiqolo kabini roller iibheringi tapered
Iibheringi mqengqeleki tapered libhekisa radial iibheringi ziqengqelekayo izileyi tapered. Kukho iindidi ezimbini: ikona encinci yekona kunye ne-engile enkulu yekona. I-engile encinci yekona ithwala umthwalo we-radial kunye ne-axial ngokudibeneyo ngokusekwe kumthwalo we-radial. Ihlala isetyenziswa ekusetyenzisweni kabini kunye nokubuyiselwa umva. Umdyarho wangaphakathi nangaphandle unokufakwa ngokwahlukeneyo. Ukucoca i-radial kunye ne-axial kunokulungiswa ngexesha lofakelo kunye nokusetyenziswa; I-angle enkulu ye-taper ithwala umthwalo we-axial kunye ne-radial ngokusekwe kumthwalo we-axial. Ngokubanzi, ayisetyenziselwa ukuthwala umthwalo ococekileyo we-axial wedwa, kodwa inokusetyenziselwa ukuthwala umthwalo ococekileyo xa usenziwa ngababini (iziphelo zegama elifanayo zifakwe ngokuhambelana).
Amakhonkco kunye neeroller zeebheringi zeCMC zenziwe nge-carbon-chrome ephezulu yentsimbi ene-GCr15. (Umahluko wokuthwala i-Steel No. yelizwe ngalinye. Jonga i-1. Amathambo entsimbi.
Ukucocwa kwiradial yeebheringi ezixineneyo zahlulwe zangamaqela amathandathu njengoko kubonisiwe kwiTheyibhile 3.
Hayi. Ukunikela No. Imilinganiselo yemida
d D B T C Ikg Kr Kor
27 Zonke iinkonzo ze-intanethi 35 64 18.5 37 37 0.539 72.7 106.3
28 Zonke iinkonzo ze-intanethi 35 64 18.5 / 24.1 42.6 37 0.5603 72.7 106.3
39 Zonke iinkonzo ze-intanethi 49 84 24 48 48 1.05 107.2 168.6
42 Iqela le-FC41394
Umqolo owodwa ophethe iroller ethweleyo uneringi yangaphandle, isangqa sayo sangaphakathi kunye neseti yee roller ezinamathelisi yindibano yesazinge yangaphakathi evaliweyo ngekheyiji emile okwebhasikithi. Isangqa sangaphandle singahlulwa kwindibano yesangqa yangaphakathi. Ngokwe-roller ye-ISO ethwele umlinganiso wangaphandle wobungakanani, naluphi na uhlobo oluqhelekileyo lwe-tapered roller ethwele umsesane wangaphandle okanye indibano yangaphakathi yentsimbi kufuneka ikwazi ukufezekisa ubume belizwe ngohlobo olufanayo lweringi engaphandle okanye ukutshintshiselana kwendibano yangaphakathi. Oko kukuthi, ukongeza kubungakanani bangaphandle kunye nokunyamezeleka kwiringi yangaphandle yemodeli efanayo, ekufuneka ihlangabezane neemfuno ze-ISO492 (GB307), i-cone angle kunye necandelo lekhonkco lobubanzi bezinto zangaphakathi zeringi nazo mazithobele imigaqo efanelekileyo yotshintshiselwano.
Ngokubanzi, i-engile ejijekileyo yomjikelo weringi engaphandle yomqolo wethala elinye elinomqolo ophakathi kwe-10 ° kunye ne-19 °, enokuthwala isenzo esidibeneyo somthwalo we-axial kunye nomthwalo oshukumayo ngaxeshanye. Inkulu ikona yekona, kokukhona amandla okumelana nomthwalo we-axial. Iibheringi zine-taper angle enkulu, yongeza i-B kwikhowudi engasemva, kwaye i-angle ye-taper iphakathi kwe-25 ° ~ 29 °, enokuthwala umthwalo omkhulu we-axial. Ukongeza, iibheringi zokuqengqeleka kumqolo omnye zinokuhlengahlengisa ubungakanani bokususwa ngexesha lenkqubo yokufaka.
Isangqa sangaphandle (okanye isangqa sangaphakathi) somqolo ophindwe kabini onamathele wethayile sisonke. Ubuso obuncinci bokugqitywa kwamakhonkco amabini angaphakathi (okanye amakhonkco angaphandle) ayafana, enesithuba phakathi. Ukucoca kuguqulwa bubungakanani besithuba. Ebubanzini spacer nayo ingasetyenziswa ukunyenyisa pre-uphazamiseko kabini-umqolo tapered roller ethwele.
Imiqolo ezine-mqolo roller. Ukusebenza kolu hlobo lokuthwala ngokusisiseko kuyafana nokwenziwe kumqolo ophindwe kabini onamathele, kodwa uthwala umthwalo omkhulu kuneerbherbher roller ezinemigca emibini kwaye unesantya esisezantsi kancinci. Isetyenziswa ikakhulu koomatshini abanzima.
Iibheringi ezinamathelwano aphindwe kabini kunye nomqolo ezine, i-ZWZ ibonelela ngobomi bexesha elide, enemigca emibini kunye nemigca emine iibheringi ezijikelezayo. Yenza uyilo olutsha nolulungiselelwe wena, ukutshintsha indlela yoyilo yendabuko yeebheringi ezitywinwe ngokupheleleyo, kwaye wamkele uhlobo olutsha lwesakhiwo sokutywina esidibanisa ukutywina kunye nothintelo lothuli ukuphucula ukusebenza kokutywina nokuphucula ukusebenza ngokutywina. Xa kuthelekiswa neebheringi zesakhiwo esivulekileyo, ukutywinwa kabini kunye nemigca emine iibheringi ezinamatheleyo anokunyusa ubomi babo ngama-20% ukuya kuma-40% kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwe-lubricant ngama-80%.
Egqithileyo Umqolo kabini iibheringi mqengqeleki tapered
Umqolo kabini Ball Ukunikela
Inch kabini umqolo
Uluhlu lweMetriki kabini
Ukucwangciswa kweTaper Roller, Pin mqengqeleki iibheringi, Iibheringi ezijikelezayo ezinzima, Gcwalisa ngokupheleleyo iibheringi zebhola, Self-Aligning Ball Ukunikela, Inch eyodwa Umqolo,